Aluminium ileli, Aluminium Iinkuphelostencils Box, Aluminium Pallet - YSXF
Ezolimo iAluminiyam yokuTyala iRack
IAluminiyam Ukukhulisa Amakhowa Amashalofu
Ukuchola amaQonga eAluminiyam yeAluminiyam Platform
Iimodeli zokuhamba ngenqwelo moya zeAluminiyam
IAluminiyam Alloy Ibhokisi yezixhobo zeAeronautical
IAluminiyam ingxubevange Sibona itroli
Iplastikhi yeAluminiyam yeAluminiyam
Ibhokisi yezixhobo zeAluminiyam
IAluminiyam Alloy Ibhokisi yezixhobo yeentlobo ezahlukeneyo zezithuthi
Aluminium ingxubevange Platen
Imveliso yoomatshini boKwakha iiMveliso zeAluminiyam
IAluminiyam ingxubevange Guardrail
Aluminium ingxubevange ileli
Ukutya okuQinisekisiweyo kweShishini iiAluminiyam Iimveliso
SIBONELELA NGEEMVELISO EZIPHAKAMILEYO
Ibhokisi yethu yoLwimi lweMaxxHaul yenzelwe ukunyusa iinqwelwana ezinesakhelo soLwimi lwe-A ukubonelela ngokugcina izixhobo zakho, izixhobo zokukhempisha, imixokelelwano yokhuseleko, imitya, izigqubuthelo zemoto, izixhobo zangaphandle, iintambo, izinto zokubopha, iintambo, iivili kunye neetekisi ezininzi . Ungaze usilibale isixhobo okanye izixhobo xa uzifuna! -Yenziwe ngokuqinileyo kunye nokuqina okunganyangekiyo kwezinto ezinobunzima be-aluminium ngezinto ezinokwakhiwa ngokupheleleyo komthungo kunye nokuqina okungumgubo wengubo yomgubo - Ipateni yedayimani yepleyiti ibonelela ngokuqina ...
Turck Ibhokisi yezixhobo
I-LIGHTWEIGHT YOKUTHUTHA KULULA NOKUTHWALA-Le bhokisi yezixhobo yenzelwe ngolwakhiwo olomeleleyo kodwa olunobunzima bokukhwela ngaphambili kwetreyila yesitayile se-A. Kulula ukudibana, ilungele ukuphatha ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye ukuba kukho imfuneko. Isisombululo esihle sokugcina izixhobo zakho okanye izinto kwigaraji yakho kwaye wongeza indawo yokugcina kwindawo erhuqwayo. DI IDAYIMONDI EQINISEKILEYO YENZEKILE- Yenziwe ngealuminium erhabaxa enamacala adityaniswe nge welding, ukuze isetyenziswe gwenxa. Ibhokisi yezixhobo iya kugcina ...
Intshayelelo yeMveliso iTshayina lelona lizwe liphuma kumazwe angaphandle kwimveliso zasemanzini.Yindawo apho kulungiswa khona iimveliso zasemanzini kunye nomkhenkce. Okwangoku iMarike eNkulu, uninzi lwezinto ezibandayo ezisetyenzisiweyo ziyiplastikhi, intsimbi engenasici, ibhodi ye-galvanized njalo njalo. Imveliso yenziwe nge-aluminium ekumgangatho ophezulu. Inezinto ezilungileyo zobomi benkonzo ende, ubushushu obuhle kunye ne-quic ...
Ingcaciso yeMveliso Ubunzima bokuPhatheka kweMoto iAluminium yokusonga ileli Umbala weSilivere, Mnyama okanye njengoko kuceliwe Uhlobo lweCustomer eyenziwe ngokwezifiso, unyango olwenziwe ngokwezifiso kumhlaba ongasetyenziswanga / uphawu lokugcwala, amandla aphezulu, umhlwa, ukuKhanya kweMveliso
I-Aluminium alloy guardrail isetyenziselwa ukukhusela ecaleni kweetraki, iinqwelwana, kunye nezithuthi zobunjineli, ezidlala indima yokukhusela, ukunyuka kunye nobuhle; i-aluminium alloy guardrail inobunzima bokukhanya, uzinzo olululo, ukumelana ne-oxidation ephezulu, ukumelana nomhlwa, ubuhle, kunye nokuthwala umthwalo Kwaye ukuqina kunokudibana neemfuno ezisemgangathweni; imilo kunye nobungakanani nako ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zabathengi. Imveliso bonisa
IAluminiyam IPlatform yokuSebenza
Intshayelelo yeMveliso Iqonga lokusebenza elisekuphakameni okuphezulu liyilelwe kwaye laphuhliswa yinkampani yethu.Ithekhnoloji yokuqhubekeka yenziwa ngokuphucula iimveliso zasekhaya.Yenziwe nge-aluminium ye-welding kunye ne-bolt fixing. Inesixhobo esinobunzima emazantsi, esiya kuthi ngokuzenzekelayo sivuse xa umthwalo ugqitha ubunzima obukhuselekileyo, uphucula ukhuseleko lwemveliso. Ingcaciso yeMveliso Ukuthwala abaThuthi beAluminiyam ingxubevange yeplatifomu yesilivere, emnyama okanye njengoko kuceliwe ...
Intshayelelo Product Le mveliso yinkampani yam uphando oluzimeleyo kunye nophuhliso iqela r & d zangaphakathi kweemveliso ezisebenzayo, enye ukusetyenziswa enkulu-isikali kwiqela xugong, kunye namanye amashishini, iye yaphumelela acclaim ububanzi kwimarike. iimveliso zezithuthi, kunciphisa ukufakwa kweengxaki ezinzima. Iimpawu zeMveliso 1. Ukusetyenziswa kwangaphakathi kweentlobo ezahlukeneyo zokomeleza, xa kuthelekiswa nezinye izinto, kuthintelwe ngokufanelekileyo ingxaki yesiphene.
Intshayelelo yeMveliso Iipelethi zisetyenziselwa ukungenisa kwindawo yokugcina izinto kunye nokukhuselwa kwendalo, ukhuseleko lokusingqongileyo, ukhuseleko lokutya kunye neminye imiba sele ibalasele. I-Aluminiumalloy pallet, endaweni yeepelethi zomthi, iipellethi zeplastiki kunye neepelethi zentsimbi, zisetyenziswe ngokubanzi kumazwe athuthukileyo afana neYurophu neMelika. Ingcaciso yeMveliso Umbala weSilivere, Mnyama okanye njengoko kuceliwe Ubunzima be-18-25kg / Ubungakanani obuCwangcisiweyo be-1200 * 800 * 152/1200 * 1000 * 152/1219 * 1016 * 15 ...
Sithembe, ukhethe thina
I-Xuzhou Caixin Aluminium Products Co, Ltd. ngumvelisi weemveliso zealuminium ezinezixhobo ezifanelekileyo zokuvavanya kunye nobuchwephesha obomeleleyo bokusebenza. izixhobo, oomatshini abakhulu kunye nezithuthi, izixhobo zelanga kunye namanye amashishini. Iimveliso zethu zamkelwe ngokubanzi kwaye zithembekile kubasebenzisi kwaye zinokuhlangabezana ngokuqhubekekayo ngokutshintsha iimfuno zoqoqosho nezentlalo.Samkela abathengi abatsha nabadala abavela kuzo zonke iinkalo zobomi ukuba banxibelelane nathi kubudlelwane bamashishini bexesha elizayo kunye nempumelelo efanayo!
Funda ngokugqithisileyo >
Thatha inxaxheba kwimiboniso
IZIGANEKO KUNYE NEMIBUZO YORHWEBO
Zeziphi iinkqubo ezithe iimveliso zealuminium zadlula kwizinto ezingasetyenziswanga ukuya ekusetyenzisweni nasekubunjweni?
Ukuphosa ngokuchanekileyo kweAluminiyam kunokwenziwa kwiimveliso zealuminium. Nangona izikali kunye neemilo zahlukile, ubungakanani obuchanekileyo, inkangeleko entle kunye nokusebenza okuzinzileyo kunokunceda abantu nabantu, kwaye bakhe umbala ohlukileyo wobomi. Kubomi bethu, kuhlala kukho inkampani yealum ...
IAluminiyam Ibhokisi yezixhobo
IAluminiyam ingxubevange yebhokisi yezixhobo yenye yeemveliso zebhokisi yealuminiyam. Luhlobo lwebhokisi olwenziwe ngezinto zealuminium alloy ukufikelela kwisicelo sokubeka izixhobo kunye nezixhobo zokulinganisa. Yahlukile kwezinye iibhokisi zezixhobo, le bhokisi yezixhobo inealuminiyamu ingxubevange. I-cha ...
Iimpawu kunye nokusetyenziswa kweefayile zealuminium zeshishini
Iimpawu 1. Kukho iinkcukacha ezahlukeneyo kunye nobukhulu, kunye nobukhulu becala elide kunye necala elifutshane liphindaphindwe. Umzekelo, indawo yethu eqhelekileyo engama-4040, 4080, 40120, 4040 isikwere, onke amacala amane angama-40mm, kunye nama-4080 licala elide elingu-80mm. Icala elifutshane ngu-40mm, kwaye lo ...